Ngendlu ezintathu "Niva", "AvtoVAZ" Iye yanyathelisa 1977. Yiqiniso, ngaleso sikhathi kwabonakala wobuciko imodeli ngokuya sezwe, futhi ngokuya induduzo. Njengoba isikhathi siqhubeka, "Niva" yahamba emgqeni inhlangano, kodwa ngemva kweminyaka eyishumi, bona, naphezu ezinye sesimanje, ayisekho kwabonakala futhi ukhululekile noma yesimanje.
"Trehdverka" emlandweni waso, sekuwumkhuba edume ngempela: kwathiwa okukhiqizwayo yokuthengisa yasekhaya futhi kwamanye amazwe, ngilinqobile ehlane futhi izintaba, lidlule lapho, esibonakala, Ungahambisa kuphela ethangini.
Nokho, legend bekulokhu eziningi kwamaphutha abalulekile, eyagcina kwenzakala sina nakakhulu. Okokuqala, kungenxa ingaphakathi Spartan kakhulu (ka induduzo, onjiniyela kungukuthi ikakhulukazi wacabanga) ukuthi-yalolucwaningo 70 ekhulwini elidlule leminyaka, kwakuyinto evamile, futhi ngenxa yeminyaka baba okungabekezeleleki. Okwesibili, imoto nge 3 iminyango zingavumi kakhulu ukuhamba nge ingaphakathi egcwele: kuya abagibeli ezingemuva kunzima ukuphuma siye. Futhi, okwesithathu, umklamo izici drive egcwele imoto ngendlela ebonisa ukucabanga nekhulu leminyaka elidlule, kodwa hhayi zamanje.
On ubuyekeza model of the yasekhaya Suv umenzi Ngacabanga isikhathi eside, usebenza tinkhombandlela eziningana kanyekanye. Omunye ucwaningo sasivumela yimpumelelo baba Vaz-2131 (enwetshiwe ngendlu ezinhlanu version).
Ngaphezu base anda futhi ungeze ngendlu 2, okuyinto ngokungangabazeki, wanezela, futhi roominess nokududuza, nokuqunga isibindi, entsha "Niva" luye lwaba mnandi futhi ephephile. Ukushayela izici, yebo, futhi kwenziwa ngcono, okwenza kube lula "AvtoVAZ" unesinye Suv real - Vaz-2131. Imininingwane yale nguqulo babengenalo ukuthusa njengoba isikhathi sakhe ngesikhathi ukhokho wakhe, kodwa kahle sifaneleka abanaki kuphela isimo, kodwa futhi ezingeni global.
Okuningi lounge ukhululekile futhi kahle nokuphepha wacabanga ukuphuma umshayeli nabagibeli wenza "Niva" hhayi kuphela "Indlovukazi off-road", kodwa futhi imoto kuhle uhambo ezungeze idolobha. Vaz-2131 kuyinto elula ngokwanele ukuyisebenzisa kuhambo nsuku zonke. Ngesikhathi esifanayo, ukushayela wakhe ukusebenza bese uvumele ukuya nokuzingela nokudoba, ngisho iqhaza yamahhashi kakhulu.
Le moto ngokuvamile ekhethelwe ukuvakashelwa ezweni baseRussia hhayi kuphela, kodwa futhi izakhamuzi izindawo zaseYurophu, eMelika ngisho Afrika. Lokhu kungenxa izindleko aphezulu izimoto nezinye onobuhle ezinezici efanayo. Noma yimuphi omunye off-road egijima ukusebenza nge efanayo Vaz-2131, kuba izikhathi eziningi ezibizayo. Ngakho ukuthenga "Niva", bese ukugibela ngokusebenzisa ezingwadule, intaba ekhuphuka noma ukubandakanya safari.
Ngo emaphandleni yasekhaya futhi babe izifunda wonke, lapho kungenzeka ukuba kudlule kuphela imoto off-road. Kubo, "Ensimini" - imoto yamaphoyisa, imoto ukuze Huntsman, futhi ngezinye izikhathi ngisho "ambulensi" - emizaneni kude nakweminye emincanyana lungatholakala ku-ke kuphela noma "UAZ". Futhi njengoba Vaz-2131 ukhululekile okungaphezulu kakhulu "ubuciko" Ulyanovsk Automobile Plant, ukukhetha akuyona esivuna yokugcina.
Izindleko brand "Niva" entsha ecishe ibe yizinkulungwane 386. Ruble, echaza kalula funa kwandisa zalolu hlobo locingo. Into kuphela ukuthi akuyona abanikazi ujabule kakhulu lokhu Suv - kuyinto petrol. Yiqiniso, banikezwe drive wonke-wheel, 1.7-litre engine abonakale umuntu ongahaheli kakhulu, kodwa sezimoto imoto ngokuvamile "odla" kuze kube amalitha 100 km (ukuthi ngalinye 15 izimoto isabelomali impela eningi). Ezinye izindaba zika-abanikazi Vaz-2131 izibuyekezo igcwele amanzi AUTOFORUM, okungenxa yezimo ezikhethekile kuphakamisa akukho ukuphikisa. Kodwa ngaphambi kokukuthenga namanje kangcono emibonweni yalabo abenza kokushiya kakade ngenxa ngendlu ezinhlanu, "Niva" isikhathi esithile.
Fuelless imoto Tesla
Ibha yamathuluzi e - kuyini? ukufaka yamathuluzi